Tilmaamaha Safarka Xalaal ee Cairns - Makhaayadaha - Masaajidyada - Hoteelada Saaxiibtinimada Muslimiinta
Cairns waxaa lagu tilmaamaa inay tahay "albaabka laga galo Baarka Weyn ee Weyn" iyo meelaha kale ee la tago sida Kuranda iyo Daintree National Park keymo kaynta fog ee Waqooyiga Queensland, Australia, in kasta oo magaaladu wax yar u hayso dadka safarka ah marka laga reebo hay'adaha dalxiiska, makhaayado faro ku tiris ah, makhaayado , iyo baararka boorsada, iyo socod dheer oo loo maro esplanade iyadoo la fiirinayo xeebta sagxadda. Dadkeeda 150,000 ayaa si joogto ah uga tiro badan booqdayaasha gudaha iyo kuwa caalamiga ah.
Deegaanka Cairns waxaa taariikh ahaan deganaa dadka asal ahaan ka soo jeeda dadka deegaanka Walubarra Yidinji. Waxaa khariidadeeyay James Cook oo loogu magac daray 'Trinity Bay' sanadkii 1770, waxaa si rasmi ah loo aasaasay sanadkii 1876-dii iyada oo ahayd deked laga dhoofiyo dahabka isla markaana loogu magac daray Badhasaabkii markaa ee Queensland. Magaca magaalada waxaa ugu dhawaaqa “Canz” dadka deegaanka; isticmaalka ku-dhawaaqida la oggol yahay ee magaca qoyska guddoomiyaha, magaalada Scottish-ka, iyo dhagaxyo is dulsaaran waa duugoobay.
Warshadaha ugu waaweyn ee magaalada waa dalxiis, iyadoo diiradda la saarayo suuqyada Yurub, Jabbaan iyo Shiinaha. Waxaa ku yaal naadiyo badan iyo makhaayado kafee ah, dhammaantoodna waxaa buux dhaafiyay dalxiisayaal caalami ah. Cairns waxaa sidoo kale taageera ganacsiyada beeraha oo ay ku jiraan sonkorta, mooska, qaxwada, shaaha iyo gobolka ugu horreeya ee khudaarta miraha kuleylka ah.
Xilliga ugu sarreeya ee Cairns waa inta lagu jiro bilaha jiilaalka ee raaxada badan ee Juun – Ogosto, gaar ahaan marka la barbar dhigo bilaha xagaaga ee kulul iyo kuwa adag. Waqti gaar ah mashquul ayaa dhaca labada toddobaad ee ugu horreeya bisha Luulyo inta lagu jiro fasaxyada dugsiga.
Ma jirto xeeb dabaasha oo laga hadlo badhtamaha Cairns, in kasta oo ay jiraan xulashooyin badan oo woqooyiga iyo koonfurta magaalada ah. Barkad aad u weyn, oo ah barkad u eg harada ayaa ku taal Xarunta aagga Magaalada Cairns, oo aad caan u ah sannadka oo dhan dalxiisayaasha iyo dadka deegaankaba. Fasaxa dhinaca xeebta ee xeebta ah, waxaa jira dhowr goobo -dalxiis oo safar gaaban ku taga waqooyiga Cairns.
Xafiiska Dalxiiska ee Cairns, 51 Esplanade,, lacag-la'aan: 1800 093 300, fax: + 61 7 4051-7509. Isniinta ilaa Jimcaha 8:30 AM-6PM, sabtida iyo axada & ciidaha dadweynaha 10 AM-6PM. Rasmi Cairns iyo xafiiska dalxiiska waqooyiga Queensland ee ku yaal Esplanade. (cusbooneysiiyay Feb 2015)
U duuli Cairns
Qayb ka mid ah Madaarka Caalamiga ah ee Cairns
Madaarka Caalamiga ah ee Cairns. Albaabka koowaad ee caalamiga ah ee laga soo galo gobolka. Waxaa sidoo kale u adeegta duulimaadyo badan oo gudaha ah. Gegada dayuuradaha ee Cairns waxay leedahay laba Terminal: Terminal Maxali ah iyo Terminal caalami ah, kuwaas oo masaafad fog u jira midba midka kale.
Duulimaadyada caalamiga ah ee u adeega Cairns waa:
Jetstar. Duulimaadyada ka imanaya Madaarka Tokyo Narita, Osaka-Kansai, iyo Singapore; koodhadhka lala wadaago shirkada waalidkood ee Qantas, iyo Japan Airlines
Hawada Niugini. Duulimaadyada ka socda Port Moresby
Air New Zealand. Duulimaadyada ka socda Auckland
Cathay Pacific. Duulimaadka afar jeer usbuucii Hong Kong
United Airlines. Duulimaadyada ka imanaya Guam
SilkAir. Duulimaadyada ka imanaya Singapore
Duulimaadyada gudaha ee u adeega Cairns waa:
Qantas. Duulimaadyada ka imaado garoomada diyaaradaha ee Australia badankood, sida Horn Island, Weipa, Arnhem Land / Arnhem Land, Alice Springs, Yulara (Uluru), Melbourne, Sydney, iyo Brisbane. Shirkaddooda Jetstar ee jaban ayaa ka duula Adelaide, Melbourne, Sydney, Darwin, Perth, Gold Coast, iyo Brisbane
Virgin Australia. Duulimaadyada ka imanaya Melbourne, Sydney iyo Brisbane
Tiger Hawada. ka yimid Melbourne iyo Sydney
Gegada diyaaradaha ee Cairns waxay leedahay adeeg Wi-Fi ah oo lacag la bixiyo.
Baska baska iyo tagaasida
Wareejinta baska waxaa laga heli karaa garoonka diyaaradaha ee Cairns, qiimaha wuxuu u dhexeeyaa $ 15 ilaa $ 17 (hal rakaab hal dhinac) iyo $ 25.00 ilaa $ 35.00 (hal rakaab soo noqosho ah) magaalada Cairns. Basaska basaska ee Madaarka Cairns waxay caadi ahaan ka baxaan garoonka saacad kasta. Cairns taksi 'wuxuu ka amba baxayaa garoonka diyaaradaha Cairns safarka wuxuu u dhexeeyaa $ 25 ilaa $ 35 ilaa Cairns City (macquul ahaan sugitaan yar). Haddii aadan ballansan wareejin ka hor intaadan imaan Cairns waxaa jira shirkad keliya oo aad la safri karto. Google shirkadaha kaladuwan ee basaska kaladuwan si aad uhesho qiimaha jaban ee ay tahay inaad ballansato kahor imaatinka Cairns. Basaska bixiya wareejinta garoonka diyaaradaha Cairns waa:
Isku Xirka Madaarka
Tababarayaasha Badda Coral
Gegada Diyaaradaha FNQ
Tareen ugu raaco Cairns
Saldhigga Cairns wuxuu ku habboon yahay Bartamaha Magaalada, si sahal ah masaafada lugaynta biyaha iyo hoteellada badankood.
Tareenada Queensland Ruuxda Queensland adeegyadu waxay ku xidhaan Cairns ilaa Brisbane (iyada oo loo sii marayo Townsville iyo Rockhampton), iyadoo lagu qaadanayo 25 saac safarka buuxa. Safar u dhexeeya Townsville iyo Cairns wuxuu qaadanayaa ku dhowaad 7 saacadood tareen (marka loo barbardhigo 4 saac oo keliya baabuur).
Tareenku wuxuu ka amba baxayaa Brisbane M Tu WF iyo Sa 3: 45PM, wuxuuna ka soo laabanayaa Cairns MW Th F iyo Su 9:XNUMX.
Wadada Tareenka ee Kuranda Scenic Railway, oo sidoo kale ay maamusho Queensland Rail, waxay ka timaadaa Cairns ilaa Kuranda, waxayna ka istaagaysaa barxada weyn ee Barron si ay ugu oggolaato rakaabku inay ka baxaan tareenka oo ay ugu raaxaystaan ​​aragtida quruxda badan ee biyaha. Tareenadu waxay ka baxaan Cairns 8:30 AM iyo 9:30 AM maalin kasta iyagoo yimaada Kuranda 10:15 AM iyo 11:15 AM.
Savannahlander wuxuu ka safraa Cairns ilaa Kuranda laakiin ka dib wuxuu kusii socdaa magaalada ka baxsan ee Forsayth. Waxay ka tagtaa Cairns markay tahay 6:30 subaxnimo Arbaco kasta iyadoo la raacayo joogsiga qasabka ah ee habeenka ah ee Almaden (oo ay la socoto wareejintu oo ay heli karto North North Queensland), ka hor inta aysan imaan Forsayth Station 5:45 PM Khamiista. Savannahlander ma soconayo inta u dhexeysa Diseembar iyo Maarso.
Ugu safri Cairns gaari ahaan
Wadada weyn ee 1,700 km ee Bruce Highway ee u socota koonfurta dhanka xeebta waxay isku xirtaa Cairns iyo caasimada gobolka ee Brisbane. Waxay qaadataa 22 saac in la kaxeeyo adigoon istaagin, waana inaad ogolaataa ugu yaraan 2-3 maalmood oo wadid adag ah, ama ka dheer xawaare aad u dabacsan oo wadista xeebta. Xeebta waxaa ku yaal magaalooyin caadi ah oo sameeya joogsasho wanaagsan iyo goobo dalxiis.
Si aad u hesho Cusboonaysiinta Coronavirus Covid-19 ee cusub ee garoomada diyaaradaha fadlan booqo Website-keena Xarunta Cairns waa mid yar oo ku filan in lagu daboolo cagta, laakiin baabuur ayaa loo baahan yahay si loo arko meelaha ku xeeran haddii aadan dalxiis ku jirin. Filo ciriiriga subaxdii iyo fiidkii ee Xarunta Magaalada, maaddaama dadka socdaalka maalmeed ay ku soo qulqulayaan gudaha iyo dibedda magaalada. Wakaalado badan oo kiraysta baabuur ayaa laga heli karaa garoonka diyaaradaha ama Xarunta Magaalada. Xilliga ugu sarreeya, hubso inaad horay u sii ballansato baabuurka.
Sunbus wuxuu ka shaqeeyaa shabakadda basaska dadweynaha wuxuuna bixiyaa siddeed waddo oo magaalada dhex mara. Goobta dhammaan waddooyinka waxay ku taal geeska Lake iyo Shield Street ee Xarunta. Waxaad ka iibsan kartaa tigidhka baska laga bilaabo $ 2.30 qof weyn oo hal aag ah.
Waxaa sidoo kale jira shirkado badan oo kirada baabuurta laga heli karo garoonka diyaaradaha Cairns.
Daawashada daawashada Cairns
Cairns waxay u adeegtaa marinka gobolka waana ka gaaban tahay aragtida dhaqameed. Dhismooyinka taariikhiga ah qaarkood laga soo bilaabo xilligii gumeysiga, Esplanade iyo baararka / baararka ayaa ah soo jiidashada ugu weyn ee Cairns.
Cairns Gobolka Gallery, 40 Abbott St (Cnr Abbott & Shields Streets),. Isniinta ilaa Jimcaha 9 AM-5PM, Sa 10 AM-5PM, Su 10 AM-2PM. Waxay ku taallaa dhismaha dhaxalka ee ku yaal Bartamaha Magaalada, Galbeedka Cairns Gallery waa meesha ugu horreysa ee gobolka ee loogu talagalay bandhigyo ay ka muuqdaan farshaxan taariikhi ah iyo mid casri ah oo ay hoggaaminayaan fannaaniinta heer gobol, qaran iyo caalamiba. $ 5.
Matxafka Cairns, Dhismaha Dugsiga Farshaxanka ee Cairns, geeska harooyinka iyo gaashaammada Wadooyinka,. M-Sa 10 AM-4PM. Matxafka Cairns wuxuu soo bandhigayaa ururinta walxaha, sawirada iyo diiwaanada taariikhiga ah ee Cairns Historical Society. Ururintaani waxay haysaa xusuusta dadka, meelaha, dhacdooyinka iyo jawiga is beddelaya ee Cairns iyo North North Queensland. Dadka qaangaarka ah $ 10, ilmaha (ka yar 14) $ 5, qoyska (2 waalid ama ayeeyooyin + 2 caruur ah) $ 25, hawlgab / waayeel / tanaasul $ 8.
Cairns Jardiinooyinka Botanic, 78-96 Collins Ave, Edge Hill ,. Maalin kasta 7:30 AM-5:30PM. The Cairns Botanic Gardens waxay qiyaastii 4 km u jirtaa Bartamaha Magaalada, iyo waddooyin badan oo basas ah ayaa mara waddooyinka kala duwan. Jardiinooyinku waxay u qaybsan yihiin 5 aag oo kala duwan, oo ay ku jiraan Jardiinooyin Rasmi ah, Rainforrest Boardwalk iyo Mangroves Boardwalk. Bilaash.
Dhacdooyinka maxalliga ah ee Kairns
Ku dheji ciyaar rugby hiwaayad magaalada haddii aad awoodid, dadka maxalliga ah waxay ciyaaraan ciyaar celcelis ah, waana hab fiican oo lagula kulmo dadka deegaanka.
Cricket-ka caalamiga ah mararka qaarkood waxaa lagu ciyaaraa Cairns at Cazaly's Garoonka. Waqtiga booqashadaada saxda ah waxaadna ku qaban laheyd ciyaar aad u wanaagsan dhowr dollar.
Cairns waxay hoy u tahay mid ka mid ah kooxaha kubbadda kolayga ee ugu wanaagsan Australia, Cairns Taipans, iyo sidoo kale mascot-ka ugu caansan Australia, Joe Blake Maska.
Soojiidashada dabiiciga ah
Soojiidashada Cairns waa barta ugu wanaagsan ee laga soo galo, lagu quusto, lagu quudiyo dusha 'Great Barrier Reef' iyo in la booqdo Daintree Rainforest oo ah ugu yaraan safar maalinle ah. Copperlode Dam iyo Atherton Tablelands waa xulashooyin kale.
Cairns waa meesha ugu kulul ee loogu talagalay kala duwanaanta duurjoogta ee Australia waana meel ku habboon in lagu arko shimbiro kala duwan, xayawaanno, iyo waxa gurguurta. Meelaha ay ka midka yihiin Mount Lewis, Lamb Range, ama Mount Hypipamee waa goobo ku habboon in wax laga arko laga bilaabo Cassowary ilaa Tree Kangaroos.
Cairns Dome Duurjoogta, 35-41 Wharf Street,. Bandhig aad u qurux badan oo duurjoogta oo dhan ah oo ay kuxirantahay qubbad muraayad ah oo dhererkeedu yahay 20-m oo dusha sare ah hudheelka caanka ah ee Reef Hotel Casino, booqdayaashu waxay dhex socdaan jawi roobeed la mid ah iyadoo shimbiraha sida baqbaqaaqa, cockatoos iyo lorikeets ay si xur ah u ag duulayaan. Eeg xayawaannada kale sida koalas, frogmouths, kookaburras, wallabies keywords, yaxaasyada, qoolleyda iyo khudaarta. Booqashooyin hagitaan oo hannaan leh iyo bandhigyo xayawaan ah ayaa dhaca maalinta oo dhan.
Maxaa laga sameeyaa Cairns
Dabaasha isticmaalaya sagxadda maalinta qaboobaha
Cairns waa jannada xiisaha leh ee isboortiga: dukaan kasta oo labaad waa Xarunta macluumaadka dalxiiska oo leh calaamado muujinaya “quusidda quusitaanka” ama “samada cirka isku shareeraysa”. Meeshu waxay u dhowdahay badweynta, buuraha iyo kaymaha roobka waxay siisaa socotada doorashooyin badan oo hawlo ah.
Heerarka istaaggu waa meel walba: qaar badan oo ka mid ah waxqabadyada qaaliga ah, oo ay ku jiraan quusitaanka qubeyska iyo samaynta cirka, ayaa ilaa $ 150 ka jaban haddii aad diyaar u tahay inaad ku sugto joojinta.
Digniinta xeebta Cairns
dabaal seeraha macmalka ah ee "lagoon" (waa barkad dabaal oo dadweyne leh oo ciid xoogaa dhinac ah) marinka u dhow marinka. Alaabtu waa xayndaab waana bilaash isticmaalka. Mool qoto dheer (ugu badnaan 1.5 m) ayaa ka dhigaysa mid ku habboon qoysaska carruurta leh. Lagoon waa meel wanaagsan oo lagu qaboojiyo gaar ahaan inta lagu jiro "xilliga geedka" inta u dhexeysa Oktoobar iyo Maajo (cf. Noolaha halista ah ee Australia) marka lagu dabbaalayo xeebaha maxalliga ah waa in laga fogaadaa marka laga reebo gudaha xayndaabka shabaqa, oo aan ka weyneyn laftiisa lafteeda . Ogsoonow in sidoo kale aysan jirin xeebo bartamaha Cairns lafteeda - mid ayaa bas u raaci kara xeebta waqooyiga, waxaana jira xayndaabyo dabbaal ah oo ku yaal Holloways, Yorkey's Knob, Trinity, Kewarra, Palm Cove iyo Ellis Beaches laakiin ciidda halkaas ka jirta ayaa ah mid kacsan .
Qorrax-dubid or dadku daawadaan qaybta cawska ah ee socod-socodka u dhow harada. Maalin qoraxdu jirto, xitaa bartamaha Cairns ee “xilliga qaboobaha”, mararka qaar waxaa jiri doona kuwo qorraxda dubta oo ka badan inta muuqata cawska muuqda.
A barbecue wadada socodka. Cairns waxay leedahay barbecube bilaash ah oo si deeqsinimo leh loogu kala firdhiyay miisaska dalxiiska ee cawska.
Socda soco - Cairns waxaa ku hareeraysan buuro lebbisan, oo waxaa jira ku dhowaad 200 socod oo socod ah oo ku yaal aaggan Dhaxalka Adduunka. Keen lugeeyayaasha waa inay isha ku hayaan Raad-socodka Tropical Walking, oo laga helo dukaamada buugaagta lagu iibiyo iyo dukaamada tacaburka. Waxay liis garaynaysaa dhammaan jidadka ku wareegsan Cairns iyo sidoo kale kuwa u dhexeeya Townsville iyo Cooktown waxayna leedahay khariidado iyaga ka mid ah iyo tilmaamaha 'sida loo tago halkaas' sidoo kale.
Quusitaanka iyo urinta
Tiro ka mid ah hawlwadeennada shirkadda Cairns ayaa maalintii socdaala iyo safarro quusin ah oo laga soo raaco labada Cairns iyo Port Douglas, ku dhowaad dhammaantoodna waxaa ku jira lacag-bixin maalinle ah oo loogu talagalay rakaabkooda. Markaad aragto Baarka Weyn, Doomaha yar yar ee quusidda ah waxay bixiyaan khibrada ugu dhow, labadaba quusitaanka iyo khuurada waxayna aad ugu fiican yihiin kuwa kalsoonida leh ama khibradda leh. Hawlgallada ballaadhan waxay leeyihiin adeegyo badan - cunto ka wanaagsan, doomaha waaweyn iyo kuwa dheereeya, hawlo badan, iyo inta badan helitaanka biyaha oo u fiican kuwa bilowga ah, laakiin mararka qaarkood waxay bixiyaan waayo-aragnimo liidata oo biyo-mareenka ah, maaddaama aagagga biyaha ee ay doonyaha waaweyn booqdaan ay aad u culus yihiin isticmaalay.
Mike Ball Quusitaanka Socdaalka, 143 Lake Street,. Goobaha quusin ku habboon noocyo halis ah. Kuu ogolaanayaa quusitaanka kelida ah iyo dib u noqoshada quusitaanka haddii aad bixiso qalab ku habboon. Qollo leh musqulo gaar loo leeyahay ayaa la heli karaa. Safar 3-habeen ah oo ka socda $ 1,480, 4-habeen safar ah $ 1,678 iyo 7 safar habeen ah $ 2,938, qalab kiro ah iyo koorsooyin dheeri ah.
Doonida cusub ee Horizon iyo Quusitaanka, PO Box 5957,, fax: + 61 7 4055-6315. New Horizon Sail iyo Dive waxay ku shaqeysaa laba doonyood oo shiraaq ah, Santa Maria iyo Riyooyinka Badda Coral, illaa bannaanka Weyn ee Weyn. Waxay kuu oggolaanayaan inaad khibrad u hesho dib u habeyn yar oo xiriir dhow leh ugu badnaan 10 rakaab ah safar kasta. Safarku wuxuu ka socdaa $ 380 qofkiiba oo labo maalmood oo nolol-badbaado ah iyo $ 540 $ oo ah seddex maalmood oo nolol-badbaado ah, dhammaan qalabka ayaa ku jira ..
Damaca Jannada,. A 25-m casri ah, catamaran si dhakhso ah u socdaalaya maalin kasta oo u socdaalaya Michaelmas Cay, halkaas oo shirkaddu ku haysato ogolaansho u oggolaanaya rakaabka inay galaan xeebta. Tani waa mid ka mid ah meelaha ugu muhiimsan ee shimbiraha lagu hoydo ee ku yaal Great Barrier Reef oo leh in ka badan 20,000 shimbiro badda ah. Caydu waxay leedahay ciid cad, biyo diirran oo diirran iyo nolol badan oo badda ah taas oo ka dhigaysa mid ku habboon khuuradda, quusitaanka biyaha, safarada doonta hoose ee muraayadda ama ku nasashada xeebta. Meesha labaad ee loo socdo waa Reef Barrier Reef iyo xannibaad ku taal Breaking Patches. Halkaas waxaad ka heli doontaa jardiinooyinka dhirta adag ee loo yaqaan 'Outer Reef' oo caan ku ah. Maalinta waxaa ku jira qado cunno kulul iyo qabow, dhammaan qalabka urinta iyo ku safridda mid ka mid ah catamaranyada ugu dhaqsaha badan ee u safraya Great Barrier Reef.
Pro Quusin Cairns, 116 Spence Street,, fax: + 61 7 4051-9955. Wuxuu ku takhasusay 11-quusid / 3-maalmood 2-fiidkii safar-nololeed oo loo maro Reef-ka Dibedda, isaga taga maalin kasta marka laga reebo Talaadada. Goobahooda quusitaanku waxay ku habboon yihiin noocyo kala duwan oo khibrad la’aan ah: safarada badankood waxaa ku jiri doona mid ama in ka badan kooxo arday ah oo sameynaya quusitaankooda. Safarka badbaadada nolosha waa $ 580 oo loogu talagalay qayb wadaag mataano ah ama laba qol (oo ay ku jiraan dhammaan qalabka). Pro Dive Cairns sidoo kale waxay bixisaa dhowr koorso PADI oo ay ku jiraan safarka badbaadada nolosha: koorsada aasaasiga ah ee Biyaha Furan (2 maalmood fasalka iyo shaqada barkadda oo lagu daray safarka), Bixinta lacag bixinta gudbinta Furan ee Biyaha, Advanced Open Water iyo Samatabbixinta. Safarku waa $ 580 qofkiiba, wadaag mataano ah ama labalaab ah iyo qalab lagu daray. Khidmadda dheeraadka ah waxay khuseysaa $ 35 qofkiiba, oo ay ku jiraan $ 15 Maareynta Maareynta Deegaanka ee Dowladda iyo sidoo kale Canshuurta bixitaanka Port iyo kharashaadka maamulka. Safarku waa $ 560 qofkiiba, wadaag mataano ah ama labalaab ah, canshuuraha reef iyo qalabka oo lagu daray. Koorsada Biyaha Furan $ 725, Gudbinta Biyaha Furan $ 630.
Tusa Dive Australia, Cnr Shield Street iyo Esplanade,, fax: + 61 7 4031-3141. Hawl wade wanaagsan. Safarro laba maalmood lagu quusto oo lagu tago dibedda 'Reef Reef' oo u dhiganta $ 160 ($ 190 oo kiro qalab ah)
Ruuxa Xorriyadda,. Doon badbaado oo 37-m ah, oo daboolaysa aagag caan ah iyo quusin fog. Safarka 3-maalmood wuxuu ka amba baxayaa Isniinta Cod Hole iyo Ribbon Reefs, safarka 4-maalmood wuxuu aadayaa Khamiista ilaa Xeebta Coral iyo Osprey Reef, ama waad sii joogi kartaa 7 maalmood oo buuxda. Duulimaad heer sare ah oo aad u hooseeya oo tagaya Jasiiradda Lizzard Island ayaa kaa soo qaada Cairns si aad ula kulanto safarka Khamiista, iyo ka soo noqoshada Isniinta. Goobaha quusitaanka ee aadka ufiican ee quusitaanka - waa inaad haysataa biyahaaga furan kahor intaadan kusoo biirin doonta.
Safarada Xeebaha Bari. Tours East Coast waxay bixisaa dalxiisyo galbinaya oo loo galinayo Great Barrier Reef, oo ay ku jiraan xulashooyinka quusitaanka, barashada quusitaanka iyo khibradaha kaladuwan. Waad booqan kartaa Reef-yada dibedda oo ay ku jiraan Ribbon Reefs iyo Cod Hole. (la cusbooneysiiyay Agoosto 2020)
Waqti xoogaa hawo ah
Haddii aad ku jiran tahay badda, madaxa kor u qaad hawada dartiis, qulqulka hangool ama buufin hawo kulul. Gobolka Cairns wuxuu leeyahay qaar ka mid ah cimilada ugu wanaagsan buufin adduunka dhexdiisa sidaas darteed safarradu waxay aadaan sanadka oo dhan marar dhif ahna waa la joojiyaa. Sidoo kale waa mid ka mid ah meelaha ugu raqiisan ee lagu duulo, meel kasta. Safarradu waxay aadayaan gudaha Atherton Tablelands waxayna ka duulayaan laydhka ugu horeeya ee Mareeba, iyagoo dhamaynaya ilaa 10AM waxayna si toos ah ugu xirmi karaan booqashada Great Barrier Reef ama waxay kugu ridi karaan Kuranda. Xaraash ka duusho Rex Point Lookout, kala badh inta udhaxeysa Cairns iyo Port Douglas wadada weyn ee Captain Cook. Sabtiyada iyo Axadaha, waa wax caadi ah in la arko duufaanno badan oo cirka cirka ka koreeya muuqaalka muuqaalka, iyo xilliga qaboobaha oo bixiya xaalado duulimaad oo isdaba joog ah.
Duulista Hawada Airplay,. Airplay waxay bixisaa tandem hang dul duulaya duulimaadyo soconaya illaa 1 saac iyo adeeg dibedda ah oo bilaash ah. Casharo iyo barasho buuxda ayaa sidoo kale loo heli karaa kuwa doonaya inay bartaan duulista.
Ku buufin hawo kulul, lacag-la'aan: 1800 800 829. Waxaa kujira quraac kulul, champagne & wareejin. $ 200.
Duulimaadyada Balloon ee Champagne,. Waxay bixisaa safar yar oo jaban oo aan ku jirin quraacda.
Skydive Cairns,, lacag la’aan: 1300 800 840. Tandem, boodbooyin kali ah, iyo koorsooyinka AFF. Mid ka mid ah diyaaradaha ugu quruxda badan waxay raacdaa ilaa 13,000 cagood oo fiirineysa tafaariiqda waqti aad u dheer ka hor intaadan lumin qadadaada wadada aad ku socoto.
Tandem Cairns, 96 Lake St, Cairns (Galitaanka Waddada Aplin),, lacag-la'aan: 1800 805 432. Waxay bixisaa tandem cirka. $ 244 $ 10,000 oo quusin, $ 295 doolar 14,000 ft.
Rafida biyaha cad
Rafting ee Waqooyiga Queensland waxay leedahay faa iidada bixitaanka sanadka oo dhan, kuleylka biyaha kuleylka iyo sahlanaanta helitaanka muuqaal neef-qaadasho iyo xawaare. Biyo soo-jiidashada biyaha cad ee gobolku waxay ku habboon yihiin dhammaan heerarka jir dhiska iyo xamaasadda. Ku dul fuul kaymaha dhirta kulaylaha ee had iyo goor sii kordhaya ee ku tiirsan wabiyada oo wali wada duurjoogta.
RnR Rafidda Biyaha Caddaan, PO Box 2945,, fax: + 61 7 4041 9499. Hawlgalka ilaa 1984. Wabiga Tully waa khibradda ugu wanaagsan uguna caansan Australia 1-maalin oo ah soo jiidashada biyaha cad, ilaa 5 hr oo raaf ah oo ka badan in ka badan 45 darajada 4 ee xawaaraha loo marayo World Heritage Rainforest. Xulashada Wabiga Barron waa safar aad u weyn oo nus-maalin ah, oo ilaa 2 hr ah oo raaf ah fasalka 3 Rapids. Wixii in ka dheer, safarka Waqooyiga Johnstone 4-maalmood waa waayo-aragnimo hal mar-nololeed. Helicopter-ka, 4 maalmood oo fasalka 5 ah oo xawli ku socda iyo 3 habeen oo aan kaambeyn ku hoos jirno xiddigo ku jira geedo wabiyaal ah oo hawdka laga nadiifinayo.
Safarro tababarayaal badan ayaa taga Cairns maalin kasta, oo ay weheliyaan dhowr boqol oo uu kala xusho. Waxaa jira safarro kaymo roob-doon ah oo ku taga Gorgorka Mossman, Webiga Daintree, Xadiiqadda Qaranka ee Daintree, iyo Cairns Highlands (Meelaha Atherton), dalxiisyo 4WD ku takhasusay, dalxiisyo indho-indheyn ah oo magaalada ah, dalxiisyo lagu tago jardiinooyinka duurjoogta, dalxiisyo dibedda ah.
Booqashooyinka Tababaraha Tropic Wings, PO 1230 Cairns,, fax: + 61 7 4041 9499. Mid ka mid ah tababarayaasha ugu waaweyn uguna dheer ee la aasaasay ee socdaalka ku maraya Cairns, oo shaqeynaya ilaa 1981. Ka shaqee safarro maalin dhan iyo bar ah Kuranda oo ay ku jiraan Kuranda Scenic Railway, Skyrail, Rainforestation Nature Park iyo Australian Balanbaalis Balanbaalis, Cape Dhibaatada iyo Daintree, Port Douglas , Atherton Tablelands iyo 'Bannaanka' .Talooyin dheeri ah oo la heli karo oo loogu talagalay Dhibaatooyinka Cape iyo Daintree.
Dalxiisyada hawdka, PO Box 2945,, fax: + 61 7 4041 9499. Maalinta iyo booqashooyinka dheeraadka ah ee aagagga Heritage ee Dunida ee Cape Cape iyo Daintree - halkaas oo kaymaha ugu da'da weyn adduunka ay la kulmaan Bareejada Weyn ee Weyn. Kooxo yaryar ayaa la socda hagayaashooda macluumaadka ku saabsan basaska qaboojiyaha leh. Booqashooyinka waxaa ka mid noqon kara Port Douglas, The Rainforest Habitat Wildlife Sanctuary, oo ku qulqulaya Wabiga Daintree oo raadinaya yaxaasyo iyo duurjoogta, dabaasha Mossman Gorge iyo sahaminta Cape Tribulation Beach. Safarrada la dheereeyey, heerar kala duwan oo hoy ayaa la bixiyaa, laga bilaabo qolalka boorsooyinka lagu qaato ee loo yaqaan 'deluxe resorts', oo leh fursado badan oo lagu caweeyo oo lagu ciyaaro. Waxqabadyadu way ku kala duwan yihiin safarada kalluumeysiga ee Rum Runner, ilaa fardooleyda, fuulitaanka hawdka, iyo kaxaynta badda.
Dalxiiska Eco ee Waqooyiga, Stratford,. Booqdaa biyo-mareennada, Lake Barrine Cater lake, the Curtain Fig geed, Caan ka ah Milla Milla, 2-koorso qado kulul iyo jiis / yogurt dhadhaminaysa caan-biyoodka noolaha-firfircoon ee Mungalli, dhirta roobka ee Koonfurta Cairns Highlands, oo lagu daray qalcadda Isbaanishka ee taariikhiga ah burburka iyo jardiinooyinka Paronella Park iyo Mena Creek ayaa soo dhacay, oo u dhow Innisfail, iyo dhagxaanta Babinda si ay ugu dabaashaan biyaha guga oo buuqsan. Ku laabo Cairns adoo maraya Wadada Bruce Highway, beeraha qasabka sonkorta iyo Ahraamta Walsh. Fursado badan oo sawir ah. Kooxo yaryar, ugu badnaan 20 rakaab ah.
Wax Ka Dukaamaysiga Cairns
Dukaamada iibiya luul ayaa si baahsan ugu baahsan Cairns, oo leh qiimo aad u fara badan. Waxaad ka heli kartaa luul dhab ah A-fasalka ka Torres Strait - ma ahan mid raqiis ah, laakiin dhamaadka ugu cadaalad badan marka la barbardhigo qiimaha yurub ama Mareykanka ee heer tayo isku mid ah.
Suuqyada Cairns Esplanade, The Esplanade @ The Lagoon (Tag Lagoon-ka Esplanade),. Sabti 8-4PM. Suuqyada Esplanade waxay leeyihiin alaab guriga lagu sameeyo, dhagxaan dhif ah, dhar, dhamaan noocyada farshaxanka, duugista, muusikada maxaliga ah, alwaaxa deegaanka ee looxyada roobka / xardhida / looxyada wax lagu jaro oo waxaad ka iibsan doontaa sameeyaha / farshaxanka alaabooyinka. Waxyaabo badan oo miisaaniyad qiimo leh, laakiin qaar ka mid ah farshaxan sare / naqshad / fikrado aad loo safeeyey oo si fudud u noqon kara qayb muuqaal ah oo guri / beer ah. Meel fiican oo laga helo hadiyad gaar ah. Iyo waxa ugu fiican oo dhan waxay leedahay 'dadka deegaanka ayaa dareemaya' arrintaas. Hubso inaad qaadatid koofiyad iyo shaashadda qorraxda maadaama ay tahay suuq dibedda ah. Baashaal oo la kulan qaar ka mid ah dadka deegaanka. laga bilaabo $ 0.50.
Suuqyada Habeenkii, 71-75 The Esplanade,. Habeen walba ee usbuuca ilaa goor dambe. Suuqyadu waa ururo isugu jira cooshado u gaar ah dalxiisayaasha: waad iibsan kartaa dhar badan, ciyaaro iyo Australiana.
Xagee wax looga cunaa Cairns
Sida qaar badan oo Cairns ah, waxaad u qaybin kartaa magaalada Esplanade iyo meelaha ku yaal meel ka mid ah, iyo magaalada inteeda kale. Fadlan hubi Khariidadeena Makhaayadaha Xalaasha.
Halkee lagu hayaa Cairns
Cairns waxay leedahay goobo umuuqda kuwo aan dhamaad laheyn oo ay kusii nagaan karto, laakiin inta lagu jiro xilli sare (Juun - Sebtember) hudheelada badankood si fiican ayaa loo sii ballansaday.
Waxaa jira in ka badan 20 hoteello, oo leh xirmo u dhexeeya $ 16-30. Qaar badan oo ka mid ah hoteelada ma ahan kuwo si gaar ah nadiif u ah ama si wanaagsan loo dayactiray.
Goobaha Magangelyada, 149 Grafton St,, lacag-la'aan: 1800 065-464, fax: + 61 7 4031-8499. Sariirta qol yar (sariiro sarre ma leh). Qiimayaasha websaydhku waxay noqon karaan kuwo duugoobay. Ku -wareejinta lacag -la’aanta ah ee lagu tagayo kana soo degayo garoonka diyaaradaha, baska ama xarunta tareenka haddii la joogo 2 habeen ama ka badan. Internet bilaash ah. Si gaar ah uma nadiifin ama si fiican loo dayactiro. Shaqaale aad u saaxiibtinimo badan. Ma aha bartamaha magaalada, laakiin masaafad socod oo fudud. (cusbooneysiiyay Feb 2015)
Beach House Backpackers hostel, 239 Sheridan St,, lacag-la'aan: 1800 229-228. Soo galid: duhur, soo bixin: 10AM. Hoyga gaarka ah iyo hoyga la wadaago. Wi-Fi bilaash ah Cunto bilaash ah iyo quraac maalin kasta. Nadiifi, aamin ah oo leh saaxiibtinimo shaqaale iyo baarka weyn ee hoyga, barkadda iyo meelaha guud. Laga soo bilaabo $ 12. (cusbooneysiiyay Feb 2015)
Bellview, 85-87 Esplanade,, fax: + 61 7 4031-2850. Qolalka jiifka laga bilaabo $ 20 halkii sariir habeenkii, miisaaniyada qolalka keli ah laga bilaabo $ 35 habeenkii, miisaaniyada laba jibbaar ah oo laga dhigo $ 47 habeenkiiba.
Dalxiiska Bohemia, 231 McLeod St,, fax: + 61 7 4041-7292. U dhow Xarunta Cairns oo leh 4 qol jiif, kali, mataano iyo labanlaab, iyo sidoo kale qolal ensuite iyo qoys. Nadiif ah oo si fiican loo dayactiray. 25 m barkadda biyaha cusbada, jikada, baarka iyo adeegga baska. Laga bilaabo $ 23 qofkiiba, habeenkiiba.
Cairns Central YHA Backpackers hostel, 20-26 McLeod St,, fax: + 61 7 4031-3158. Sariiraha jiifka ah ee qolalka la wadaago $ 23-25 ​​habeenkiiba, labalaab iyo laba qol oo mataano ah laga bilaabo $ 54 habeenkiiba.
Capns City Boorsooyinka, 274 Draper St,. Yar, aamusnaan leh oo saaxiibtinimo leh kuna yaal backstreet deggan oo 5 daqiiqo socod ah u tagta Xarunta Dhexe ee Dukaameysiga ee Cairns. Dharka oo buuxa iyo tas-hiilada jikada iyo internetka oo ah $ 3 saacadiiba.
Rakaabka Castaways, 207 Sheridan St (Xarunta Magaalada u dhow),, lacag la'aan: 1800 351115. Gelitaan: 10AM, galitaan: 9:30 AM. Qoyska yar ayaa hudheel martigaliya iyadoo diiradda la saarayo nadaafadda iyo adeegga saaxiibtinimo. Wifi bilaash ah iyo cunno fiidkii Woolshed, shaah iyo kafee bilaash ah. Hoyga la wadaago ee laga wadaago laga bilaabo $ 19, hal, labo, mataano iyo qolal qolal ah oo la heli karo.
Hoyga martida, Cnr Bunda & Terminus Street Parramatta Park,, lacag-la'aan: 1800 058 440. Gelitaan: 10AM, galitaan: 9:30 AM. Guri yar oo hudheel ah oo ku baahsan Cairns Central oo leh suuq weyn iyo daarad u eg lagoon. Xaaladda hawada ayaa la heli karaa. Hoyga la wadaago ee hoyga laga helo $ 22, qolal kali ah iyo labo mataano ah ayaa la heli karaa.
Guriga Martida ee Floriana, 183 Esplanade,, fax: + 61 7 4051-3056. Qolalka hore waxay u egyihiin Badda Coral, Floriana waa hoyga martida ah ee Art Deco 1930s. Waa socod 15-daqiiqo ah oo magaalada loo socdo waxayna leedahay qolal leh goobo wadaag ah iyo guryo iskeed u kooban.
Gilligans Backpacker Hotel iyo Dalxiis, 57-89 Grafton St, lacag-la'aan: 1800 556-995. Qolal hudheel gaar loo leeyahay ayaa sidoo kale la heli karaa. Cunto bilaash ah habeen kasta, nadiif, amaan, hudheel madadaalo leh hawlo fara badan iyo barkad dabaal oo aad u ballaaran. Qolalka jiifka la wadaago ee ka bilaabmaya $ 18 habeenkiiba.
Dalxiis Dalxiis Njoy, 141 Sheridan St,. Bas bas bilaash ah oo taga garoonka diyaaradaha waqtiyada loo qoondeeyay, Cabitaan soo dhaweyn oo bilaash ah Baar Zanzibar iyo Grill. Guri aad u nadiif ah, aamin ah, madadaalo leh oo saaxiibtinimo leh soo dhaweyn qabow iyo aagga barkadda. Hoyga la wadaago ee hoyga laga bilaabo $ 15 habeenkii.
Reer Guuraaga Cairns (Hoolka hostel), 341 Lake St, Cairns,, lacag-la'aan: 1800 666-237. Soo gal: 2PM, out-out: 10AM. Baska baska oo bilaash ah Guri aad u nadiif ah oo leh barkad weyn oo lagu dabaasho iyo garoon kubbadda laliska. Hoyga la wadaago ee hoyga laga bilaabo $ 14 habeenkii. (cusbooneysiiyay Nofeembar 2015)
Waqooyiga Greenhouse, 117 Grafton Street,, lacag la'aan: 1800 000 541. Dhammaan martidu waxay helayaan quraac maalinle ah oo bilaash ah, internet bilaash ah oo aan xad lahayn 24/7, safar godka dabaasha oo qarsoon oo lacag la'aan ah, safar doon ah iyo hawlo badan. Waxay ku taallaa Bartamaha magaalada.
Boorsooyinka Reef, 140 Grafton St,. Soo galid: 10AM, soo bixitaan: 10AM. Internet bilaash ah oo WiFi ah. nadiif ah oo saaxiibtinimo leh. Bartamaha Magaalada oo leh barkad iyo aag weyn oo bannaanka ah. $ 15.
ibis Styles Cairns, 15 Florence Street (Corner of Florence iyo Lake St),.
Huteelada dhexe ee Cairns, hudheelada, iyo hoyga waxaa halkan lagu taxay alifba ahaan.
181 Isboortiga (Waxay ku dhowdahay Isbitaalka Cairns Base iyo 15 daqiiqo magaalada u jirta).
Amaroo At Trinity, 92-94 Moore St, Trinity Beach (Inta udhaxeysa Cairns iyo Palm Cove, safarka 15-daqiiqo ee Cairns CBD),. Istuudiyaha casriga ah ama qolka ku yaal Cairns waqooyiga xeebta. Ku dhow makhaayadaha, hudheelka, dukaameysiga. Meel xeeb sare leh, aragtiyo badda Coral iyo buuraha gadaal. Boqorada iyo ikhtiyaariyada sariirta mataanaha ah, kor u qaad marinka dhamaan dabaqyada, tas-hiilaadka dharka ee heer kasta. $ 130-216.
Doubletree waxaa qoray Hilton Cairns, 21-123 The Esplanade & Florence St,, fax: + 61 7 4031-3770. Waxay ku taal meel dhowr daqiiqo u jirta Xarunta, huteelku wuxuu leeyahay barkad dabaasha oo caadi ah, iyo balli agagaarka atrium oo leh Barramundi weyn! Qolalka badankoodu waxay leeyihiin aragtiyo badda Qolal labalaab ah qiyaastii $ 150 habeenkiiba.
Harada Cairns Resort iyo Spa, 2 Greenslopes St,. Guryaha loo dalxiis tago ee xiddigta 4.5-ka ah 11 hektar oo ah beero cagaaran oo quruxsan, harooyin iyo barkado xeebeed xeebeed.
Dalxiiska Dalxiiska Marlin Cove, 2 Keem St. Trinity Beach (15 min min Cairns City),. 4-xiddig oo hoy iskiis ah u degen oo ku yaal Trinity Beach. Ku habboon qoysaska.
Novotel Cairns Oasis Resort, 122 Lake St (Hal baloog oo ka yimid Xarunta Cairns),, fax: + 61 7 4080-1889. Qolalka boqortooyada ee loo dalxiis tago iyo qolal mataano ah (oo leh labalaab) qiyaastii $ 150 / habeenkii.
Tayada Hotel Sheridan Plaza, 295 Sheridan St (5 daqiiqo oo ka socota gegida dayuuradaha Cairns iyo Xarunta magaalada),, fax: + 61 7 4031-6226. 4-hudheel hudheel ah oo qaab moodle ah.
Guryaha loo yaqaan 'Queens Court Accommodation Cairns', 167-171 Sheridan St (Xarunta Cairns),. 81 qol iyo qolal caadi ah oo ay ku jiraan qaar ka mid ah qolalka is-haysta. Adeegyada qubayska ee martida goor dambe oo socdaal ah, dhar dhaqidda martida, barkadda dabaasha, aagga BBQ, cuntada maqribka, kaydinta boorsooyinka habeenkii oo lacag la’aan ah, baarkinka goobta oo sugan. Baahiyaha ADSL ee dhammaan qolalka, wifi iyo dukaanka internetka. Miiska dalxiiska, qolka nasashada. Quraac, wareejin madaar oo lacag la'aan ah ayaa la heli karaa. Qolalka oo dhami waxay leeyihiin meel ammaan ah. Qolalka miisaaniyadda laga bilaabo $ 69/habeen, qolalka mataanaha ah ee motel-ka $ 103/habeen, suite sc from $ 140, suite family $ 229 ..
Dalxiiska Dalxiiska Reef, 10-14 Harpa St, Palm Cove (22 km u jirta Cairns), fax: + 61 7 4059-1745. Inta udhaxeysa xeebta qumbaha ee qumbaha iyo kaymaha, roobka kuleylaha.
Rydges Plaza Cairns, Cnr Spence & Grafton Sts,. U dhow Xarunta Shirka Shirarka ee Cairns, Reef Casino, Terminal-ka bixitaanka Great Barrier Reef iyo meelaha laga dukaameysto. (cusbooneysiiyay Feb 2015)
Guriga Fasaxa ee Wilks, 78 Wilks St,. Soo gal: 2PM, out-out: 10AM. Waxay leedahay 4 qol / 2 musqul, 2 qol fadhiga ah, qolka gudaha iyo banaanka. AustarTV, Wi-Fi, wicitaanada maxaliga ah ee bilaashka ah, A / C, jikada sifiican u qalabeysan iyo baarkin dhigida wadada. Beer hore iyo gadaal oo si buuxda loo ooday. Xayawaan raaxo leh codsi. Joogitaanka ugu yar 4 habeen. $ 215 / habeenkii (min 4 habeen).
Villa Marine Holiday Resort, 8 Rutherford Street, Yorkeys Knob Beach, Cairns,. Dalxiiska Dalxiiska ee Villa Marine wuxuu leeyahay aqal raaxo leh oo lagu raaxeysto oo leh aragtiyo cajaa'ib leh oo ku saabsan keymaha ku xeeran. Ama sii joog gurigooda jacaylka leh ee Malabka. Guryaha Qoyska iyo Miisaaniyadda ayaa la heli karaa sidoo kale. Yar, xasilloon oo nabdoon, waxay leeyihiin dhammaan noocyada hoyga ee ku habboon baahiyahaaga. $ 99 illaa $ 150 / habeenkii.
Grand Mercure Rockford Esplanade,. Bar iyo dabaasha dibedda. Badweynta, barkadda iyo aragtida buuraha ee ka agdhow xeebta Palm Cove. Meel u jirta Xarunta Dukaameysiga ee Palm Cove Village.
Nalalka Cairns Harbor, 1 Marlin Pde, Cairns,. Waxaa loo adeegsaday 1-2 qol jiif oo leh cairns water iyo Trinity Park views.
Clarendon oo ku taal Spence, 79 Spence St,, fax: + 61 7 4041-4132. 2-3 qol oo qol jiif ah oo leh balakoonno, jikooyin si buuxda u qalabaysan, oo ku yaal qolal ku habboon. U dhow Esplanade, Reef Fleet Terminal, iyo makhaayadda.
Regency ee Spence, 79 Spence St, fax: + 61 7 4041-4132. 2-3 qol oo qol jiif ah oo leh balakoonno ku yaal agagaarka degmada makhaayadda, suuq laga dukaameysto, iyo Terminal Fleet Terminal. Marti gelitaanka dalxiis iyo dabaasha banaanka. Walaasha-hantida Clarendon ee Spence.
Goobaha Sebel (Cairns International Hotel), 17 Abbott St (Xarunta Cairns),, fax: + 61 7 4031-1801. Qolal ballaadhan iyo qolal ballaadhan oo leh balakoonno, oo ka eegay dekedda iyo magaalada. Laga soo bilaabo $ 200 / qolka.
Shangri-La Hotel, Wadada Pierpoint,, fax: + 61 7 4031-3226.
Hotel Pullman Reef, 35-41 Wharf St,, fax: + 61 7 4030-8777. Ka mid ah hudheelada ugu wanaagsan magaalada, oo ku yaal isla dhismaha Reef Casino iyo aragtiyada laga qabo Trinity Bay. Laga soo bilaabo $ 220.
Nabdoonow oo iska ilaali khayaanada Kairns
Isbitaalka Cairns Base
Cairns guud ahaan waa magaalo amaan ah oo leh dhamaan waxyaabaha laga xumaado (sida jeebadaha iyo touts) ee magaalo ay ka buuxaan dalxiisayaashu. Hanjabaadaha ugu caansan waa dabeecadda iyo cimilada. Cairns waxaa ku dhaca duufaanno kuleyl ah inta lagu jiro xilliga qoyan (Diseembar illaa Maarso) taas oo dhaawac u geysata kaabayaasha dhaqaalaha isla markaana joojiya howlaha bulshada.
Isbitaalka Cairns Base, 165 The Esplanade ,. Adeegyada gurmadka iyo dhammaan waaxaha caafimaadka ee caadiga ah
Magaaladan yar ee ku dhex taal buuraha kaymaha ka daaqay ee woqooyiga Cairns ayaa soo jiita kumanaan dalxiisayaal ah usbuuc kasta waxaana laga yaabaa inay tahay meesha ugu caansan magaalada.
Kuranda (kor u qaadista 330 m) waxay 25 km u jirtaa Cairns iyada oo loo sii maro Waddada weyn ee Kennedy, taas oo masaska ku sii marta Macalister Range. Si kastaba ha noqotee, dadka soo booqda badankood waxay magaalada ku gaaraan iyagoo qaadaya Skyrail Rainforest Cableway ama Kuranda Railroad, oo labaduba bixiya u wareejinta Cairns iyo xirmooyinka xirmooyinka ee meelaha soojiidashada Kuranda.
Skyrail waxay u safreysaa meel ka sareysa kaymaha iyadoo ay saldhigyo ku socdaan wadada si ay u sahamiyaan bay'ada roobka una eegaan Barron River Falls. Tareenka Kuranda wuxuu socdaal qurxoon ku marayaa Barron Gorge National Park. Magaalada lafteedu waxay leedahay adeegsi badan waxeeyna hoy u tahay dhowr jardiinooyin duurjoogta ah.
Mareeba, oo ah cirifka dibedda, halkaasoo qorraxdu u soo baxdo 300 maalmood sanadkii, waxayna soo saaraan inta badan dalagga kafeega Australia. Safarrada ka socda Cairns ayaa la heli karaa.
Mossman Gorge 70 daqiiqo waqooyiga Cairns waa meel wanaagsan oo lagu qaboojiyo. Ka fogow inaad timaadid isla waqtiga tababarayaasha dalxiisyada, aadna u taxaddar dabbaasha maadaama ay durduhu aad u xoog badan yihiin.
Kaymaha roobka Daintree oo si rasmi ah u ah keymaha ugu da'da weyn adduunka wuxuu ku yaal waqooyiga saacad iyo bar. Halkan waxaad ku arki kartaa Australia noocyadeeda kala duwan ee dhirta iyo duurjoogta sidoo kale raacida mid ka mid ah meelaha ugu dalxiiska badan dalxiiska - Jungle Surfing.
Jasiiradaha Green Island iyo Fitzroy Island, oo labaduba ah jasiirado dalxiis oo soo dhoweeya safarada maalinlaha ah, waxay u jiraan 45 daqiiqo gudahood Cairns markabka doonta.
Savannahlander waa safar tareen afar maalmood soconaya oo ka ambabaxa Cairns una socda magaalada ka baxsan ee Waqooyiga Queensland. Waa hab gaar ah oo lagu arko godadka Chillagoe iyo tuubooyinka Undara lava.
Cooktown waxay qiyaastii 3 saac woqooyi ka xigtaa xeebta laga soo bilaabo Cairns, waxayna leedahay taariikh, jardiinooyin qaran iyo xeebo si loo baadho.
Xeebta 'Mission Beach' oo ah xeeb kuleyl qurux badan leh ayaa qiyaastii saacad iyo badh u jirta koonfurta. waana marinka Jasiiradaha Dunk iyo Bedarra. Xeebta Mission waa mid ka mid ah meelaha yar ee laga yaabo inaad ku aragto shimbirta Cassowary oo aad dhif iyo naadir u ah.
Port Douglas oo ah magaalo xeebeed xeebeed iyo marin kale oo loo maro Great Barrier Reef iyo Daintree Rainforest waa saacad woqooyi iyadoo ay weheliso mid ka mid ah darawalada ugu fiican Australia.
Harada Tinaroo waxay ku taal Atherton Tablelands qiyaastii saacad koonfur galbeed ka xigta Cairns. Harada Tinaroo waxay ku fiican tahay dabaasha, isboortiga biyaha, socodka baadiyaha, kalluumeysiga iyo kaamam.
Beerta Qaranka ee Uluru-Kata Tjuta waxay leedahay duulimaadyo toos ah oo ka yimaada Cairns (marka lagu daro Sydney). Haddii aad samaynayso dalxiis Australia ah, markaa Cairns waa meel fiican oo ka durugsan Xarunta cas.
Hoteelada Xalaal & Muslimiinta ee Cairns
181 Guryaha Esplanade Cairns
201 Lake Street guryaha Cairns
Agincourt Beachfront Apartments Clifton Xeebta
Argosy On Guryaha Xeebta Cairns
Hotelka Central Cairns Hotel
Dalxiiska Dalxiiska Australis Cairns
Guryaha ugu Fiican Galbeedka Central Plaza Cairns
Magaalada Galbeedka Ugu Fiican Sheridan Cairns Motel
Ugu Fiican Western Plus Cairns Guryaha Dhexe
Dalxiiska Dalxiiska ee 'BreakFree Royal Harbor Resort Cairns'
Guryaha Cairns City
Hotel Cairns Harbor Lights
Guryaha raaxada ee Cairns
Cairns Cusub Chalon Motel
Hotel & Guryo Cairns Queenslander ah
Guryaha Cairns Reef & Motel
Cairns Sheridan Hotel & Xarunta Shirka
Hotel Cairns Sunshine Tower
Guryaha Cascade Gardens Cairns
Meelaha Dalxiisyada Dalxiisyada ee Terraces Cairns
Guryaha Fasaxyada Clifton Sands Clifton Beach
Raaxada Hotel Acacia Court Cairns
Qolalka Coral Towers Holiday Suites Cairns
Sands Sands Beachfront Resort Cairns
Grosvenor Guryaha Fasaxa ee Cairns
Qari Hotel Cairns
Hoteelka Hilton Cairns
ibis Styles Cairns (Horay Xilliyada oo dhan)
Il Palazzo Boutique Apartment Hoteel Cairns
Jack & Newell Cairns Guryaha Fasaxyada
Xeebta Dalxiiska Xeebta Kewarra
Hotel Mercure Cairns Harboride
Reer Guuraaga Cairns Backpackers hostel
Reer Guuraaga Cairns Beach House
Reer guuraaga Esplanade Cairns
Qolalka North Cove Waterfront Suites Cairns Apartment
Guryaha Dalxiis ee Oasis Inn Cairns
Park Regis Magaalada Quays Cairns
Hoteelka Queens Court Cairns
Qaanso-roobeed Inn Cairns
Reef Timirta Guryaha Cairns
Rydges Esplanade Guryaha Fasaxyada
Hotel Shangri-La Marina Cairns
Koonfurta Cross Atrium Apartments Cairns
Gawaarida Balinese Motel Cairns
Harada Cairns Resort & Spa
Tradewinds Mcleod Holiday Guryaha Cairns
Guryaha Tropic Towers Cairns
Villa Vaucluse Guryaha Cairns
Guryaha Vision Cairns Esplanade
Guryaha Ku Yaala Xeebaha Biyaha
Waters Edge guryaha Cairns
Beerta Madadaalada ee Whiterock
eHalal Safarka Mart > Safarka Xalaal ee Australia > Xalaal Cairns Travel Guide
Degenaanshaha Radisson Blu Residence	   
Tilmaamaha Safarka Malacca Xalaal